अतीतका ती पलहरू | मझेरी डट कम
kbs — Sat, 06/12/2010 - 13:21
अनायासै, मध्यरातमा एक्कासि म ब्यूझिएँ। सानो मैनबत्तिको धिपधिप गर्ने प्रकाशमा म केही लेख्न खोज्दै थिएँ। वातावरण सुनसान थियो। दिमागमा एकआपसमा पात्रहरू तयार भएर बसिरहेका थिए। बस् त्यसलाई कापीमा उतार्नुपर्ने थियो। छिमेकमा दुई बुढाबुढी एकआपसमा घर–सल्लाह गर्दै थिए। उनीहरूको प्रष्ट संवाद सोझै मेरो कानमा तरङ्गित भईरहेको थियो। उता उर्मि भने चाहिँ आफ्नो तन्द्रालाई अँगाल्न सकेकी थिइन। कसरी पाओस् त सुत्न। दिनभरि चर्किलो घाममा लेभरकाम गिट्टी, ढुङ्गा, इट्टा बोक्नुपर्ने बाध्यता त्यही माथि श्वासको बिमारी। उनको छोरो 'संकल्प' पनि बेस्सरी रूँदै थियो। उर्मि खोक्दै फुल्याउँदै थिई। त्यसलाई के भएको थियो कुन्नी थाहा थिएन।
“राजेश दादा! आमालाई के भो? किन आँगनमा सुत्नु भो?” यस्तो अबोध प्रश्नले म आफैँमा भस्किएँ। मैले त्यस बालकलाई कसरी 'तेरो आमा मरी' भनुँ। म कसरी 'तेरो आमाले तलाई यो संसारबाट एक्लै छोडे गई' भनुँ। म नाजवाफ भएँ। ऊ सधैँ मेरो घरमा आउथ्यो र अक्सर भन्ने गर्दथ्यो,“दादा म पनि थुलो भएर, तपाइ दस्तै कम्पुतर चलाउँछु, धेरै पध्छु र आमालाई पाल्छु।” म उसको यस्तो सपना देखेर म उसप्रति गर्भान्वित भएको थिएँ। किनकी उसको त्यो सपनामा आफ्नो आमालाई छुट्टाएको थिएन्, उसले आफ्नो आमाको दुःख देखेको थियो। तर आज ति सपनाहरू सबै चकनाचूर भएँ। खहरेमा आएको बाढीको भेलझँै उसका ती सपनाहरू भताभुङ्ग पारेर लगेको थियो। उर्मिले उसलाई टुहुरो बनाएर गएकी थिई। उसको सपनालाई तोडेर गएकी थिई।
अतिथि — Thu, 06/17/2010 - 10:25